Goadelopa: Andron’ny rano · Global Voices teny Malagasy
Goadelopa: Andron'ny rano
Nivoaka ny 23 Oktobra 2009 17:39 GMT
Any amin'ny nosy miteny frantsay any Karaiba, nosin'i Goadelopa, manana anaram-bositra manao hoe “Nosin'ny rano tsara” koa, dia iankinan'ny ain-dehibe ny rano. Tena zava-dehibe satria izy no mamaritra ny toetr'andro any an-toerana, na izany amin'ny alalan'ny tsy fahitana azy na izany amin'ny alalan'ny fahatondrahany: ny “Karemy” fotoanan'ny maintany izay maharitra 6 volana sy ny “Hivernage” fotoanan'ny rivo-mahery sy ny orana maharitra 4 volana. Tsy azo lavina fa ny mponina any an-toerana dia tsy mionona fotsiny amin'ny fahitany rano fa indrindra koa amin'ny kalitaon'ity zava-tsarobidy ity.
Izany indrindra no antony, 46 taona lasa izay, nitsanganan'ny fikambanana Syndicat Intercommunal de l'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe [Fr] (Fikambanan'ny faritra amin'ny famatsiana rano any Goadelopa). Tany am-piandohana dia namatsy rano tanàna 3 izy ary amin'izao fotoana izao kosa dia tanàna 13 amin'ireo 36 any an-toerana no iasany. Ankehitriny anefa dia misedra olana maro ny fikambanana, olana ara-teknika sy ara-tontolo iainana, ary mikarakara ny Andron'ny Rano any Gadelopa izy efa 8 taona izao hahazoany mizara ny heviny sy ny tanjony amin'ireo manam-pahaizana sy olon-tsotra maro. Ilay mpitoraka bilaogy JarryCafé [Fr] izay maneho manokana ny fiainana andavanandron'ny mponina any Jarry, renivohitra ekonomika any Goadelopa, no nivoy ny famelabelaran-kevitra hatao mandritra ny 5 andro:
Du 13 au 17 octobre venez vous informer au WTC de Jarry sur les problématiques environnementales de l’eau et ses enjeux dans les années à venir.
Ny 13 hatramin'ny 17 oktobra, tongava mihaino ny olana ara-tontolo iainan'ny rano sy ny vokatr'izany amin'ny ho avy hatao ao amin'ny WTC ao Jarry.
Tsy azo lavina fa misy ny voka-dratsy maro, ka ny bilagoy Indiscrétions any Goadelopa no miresaka ny lohahevitra napetraky ny filohan'ny sindika, toy ny fahasimban'ny rian-drano sy ny fanadiovana rano, ny fandaniana fahatany ny rano sy ny fomba hitehirizana azy hitsinjovana ny maintany. Eo ankilan'izany rehetra izany dia efa ho taona maro izao no efa nanintona ny sain'ny mponina any Goadelopa ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny krizin'ny chlordécone, ary mitatitra ny fanambarana am-pahamalinana nataon'ny filoha ny bilaogy Indiscrétions[Fr]:
Il y a eu des générations d'agriculteurs qui ont utilisé des produits phytosanitaires qui ont pollué les nappes d'eau, surtout en Basse-Terre. On dit qu'il y a des eaux polluées…
Taranaka mpamboly nifandimby no nampiasa zavatra nandoto ny rano, indrindra tany Basse-Terre. Voalaza fa voaloto ny rano…
GaïaSoleil koa no milaza fa ny fandotoana ny rano amin'ny chlordécone dia horesahana mandritra ity famelabelaran-kevitra ity, ankoatry ny lohahevitra hafa[Fr]:
Le problème de la pollution de rivières à la chlordécone est certes dans toutes les têtes lors de ces journées. Cette catastrophe écologique n’est qu’un aspect de la pollution générale des milieux aquatiques : d’autres produits phytosanitaires et d’autres pollutions, dont celles pouvant être occasionnés par les déchets ou les vidanges sauvages sont en cause.
Ao an-dohan'ny rehetra ny olana mikasika ny fandotoana ny rano amin'ny chlordécone mandritra ireo andro ireo. Ity fahasimban'ny tontolo iainana ity dia fisehon'ny fahalotoana ankapoben'ny rano rehetra: zavatra hafa sy fandotoana hafa, izay avy amin'ny fako sy ny fanadiovana tsy am-piheverana no manahtonga ny sasan.
Domactu koa dia milaza mikasika ity fotoana ity ary nanipika manokana ny fiarah-mientan'ny faritra ao amin'ny lohahevirty ny famelabelarana hoe: “Rano: tena ilaina, fahamarinana ary firaisan-kina aty Karaiba”. Manindry mafy koa i GaïaSoleil ary manolotra ireo vahiny nasaina sy ny andraikiny avy mandritra ity famelabelarana ity[Fr]:
…les intervenants de Cuba, de République Dominicaine, d’Haïti ont eu l’occasion d’exposer les problématiques de l’eau sur leurs territoires et les solutions qu’ils ont choisies.
…Ny mpandray anjara avy any Kioba, Repoblika Dominikana, sy Haïti dia hanana fotoana hamelabelarana ny olan'ny rano any aminy sy ny vahaolana nentin'izy ireo niatrika izany.
Ity teny farany nataon'ny Indiscrétions ity no tena zava-dehibe ka nahatonga ny mponina any Goadelopa hieritreritra momba ny ranony ka nizara izany tamin'ireo mponina manodidina azy any Karaiba: ny fitokana-monina sy ny tsy fisian'ny fiaraha-miasan'ny faritra[Fr]:
…Je vous parlais de l'eau de la Dominique pour irriguer Marie-Galante. J'ai vu, à Santo Domingo, une station d'épuration qui fonctionne parfaitement, qui coûte moins cher à la construction que tout ce que nous avons. Il faut regarder ce qui se fait autour de no
Tantaran'ny Karaiba farany
2 andro izaySuriname
5 andro izayEtazonia
Ny hafainganan'ny siokan'i Nicki Minaj mandiso momba ny vaksiny COVID
4 herinandro izayHaiti
Ny fomba nampiasàn'ny Haitiàna iray ny soanambo mba hiteraka fahazakàna dona taorian'ny horohorontany
20 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana